कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई बजेटको चटारो, सरोकारवालासंग सुझाव माग्दै – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई बजेटको चटारो, सरोकारवालासंग सुझाव माग्दै
कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई बजेटको चटारो, सरोकारवालासंग सुझाव माग्दै
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ असार ५, बिहीबार १३:४३ मा प्रकाशित
गुल्मी, ४ असार । अहिले स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको चटारो बढेको छ । जसका लागि सुझाव संकलन भइरहेका छन् । कालिगण्डकी गाउँपालिकाले पनि स्थानीय राजनैतिक दल, पत्रकार एवं सरोकारवालासंग सुझाव संकलन गरेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विशेषगरी विगतमा संचालन गरिएका योजनाहरुहरु समिक्षा नभएको, दिगो किसिमका योजना नभएका कारण परिणाम राम्रो नआएको लगायतका बिषयमा गुनासा तथा सुझाव संकलन भएका छन् ।
कार्यक्रममा आगामी बजेटमा रोजगारी सिर्जना, दीगो र सन्तुलित विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका पक्षलाई ध्यान दिन गाउँपालिकालाई सुझाव दिइएको छ । कालिगण्डकी गाउँपालिका बुद्धिजिवी परिषद्का अध्यक्ष गोविन्द गौतमले गाउँपालिकाले राजश्व संकलनका बिषयमा मुख दर्शक भएर बसेको आरोप लगाए । उनले आँखा अगाडीबाट कालीगण्डकीको ढुङ्गा गिट्टी स्याङजा पुग्दा समेत चासो नदिने सरकारले कसरी रावश्व संकलन गर्ला ? भनेर प्रश्न गरे । उनले गाउँपालिकाले अव आवासीय ििबदालयमा नैतिक व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई प्रति दिन २÷२ घण्टाको व्यवहारिक तथा नैतिक शिक्षा दिनेगरी योजना बनाउन गाउँपालिकालाई जोड दिए । साथै उनले तत्काल गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कालिगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्षा रामजी ढकालले बसाईसराई रोक्ने खालको बजेट बनाउन गाउँपालिकालाई सुझाव दिए । ‘ठुला–ठुला विकासका कुराले पुग्दैन बसाइँसराईले गाउँ रित्तिए, विकास कसका लागि ? उनले भने,‘ दिर्घकालिन नागरिक मैत्री काम गरौ ।’ नेपाली काङ्ग्रेस कालिगण्डकी गाउँपालिकाका संयोजक निम श्रीसले योजना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभएर सामुहिक हितको लागि ल्याए न्योचित र परिणाममुखी हुनेमा जोड दिए । ‘अहिले जनप्रतिनिधिहरु पनि धेरै जिम्मेवार छैनन, जसले गर्दा योजनाको प्रतिफल सोचेअनुसार भएको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यसलाई सच्याए गाउँपालिका समृद्ध बन्न सक्छ ।’
पत्रकार शिव सुवेदीले हरेक स्थानीय तहको आफनै गुरुयोजना बनाउनुपर्ने सुझाव राखे । कालिगण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पल्लीले आफुले कागजको नीति व्यावहारमा उतार्न निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । उनले नागरिकमैत्री बजेटका लागि जनप्रतिनिधीनै चनाखो भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कर्मचारी दुई दिनका पाहुना हुन, जनप्रतिनिधीले बनाएको नीति कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने हो,’उनले भने,‘ त्यसैले जनप्रतिनिधी, राजनैतिक दल, पत्रकार र सरोकारवालासंग छलफल राखेका छौ ।’
गाउँपालिका उपप्रमुख तारा थापाले आफुहरु जनताकै काममा रातदिन व्यस्त भएपनि दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुन नसकेको बताइन् । गाउँपालिका प्रमुख वेद बहादुर थापा मगरले कार्यक्रममा आएका सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपमा गाउँपालिकाले ग्रहण गर्ने प्रतिक्रिया दिए । त्यसका साथै उनले आगामी बजेटमा संकलित सुझावहरुलाई अधिकतम समेट्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले गाउँपालिकाको विकासमा जनप्रतिनिधी मात्रै दौडिएर नपुग्ने भएकाले सधै सवैको साथ आवश्यक भएको बताए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषी र अन्य धेरै काममा गाउँपालिकाले काम गरिरहेको बताउँदै त्यसको ठोस परिणाम ल्याउन भने केहि समस्या भएकाले आफुहरु पनि सन्तुष्ट हुने स्थिती नरहेको बताए ।